U-Bhupinder Singh, owayenguMphathi weMveliso kwi-Bentley Systems, ejoyina iBhodi yaBalawuli be-Magnasoft-Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/U-Bhupinder Singh, owayenguMphathi weMveliso kwi-Bentley Systems, ejoyina iBhodi yaBalawuli baka Magnasoft
Njengoko umhlaba ulungiselela ukusinda kwihlabathi lasemva kwe-COVID, IMagnasoft, Inkokeli kwicandelo ledatha yedijithali yolwazi kunye neenkonzo ezinobukho eIndiya, eUK naseMelika, zisizisela iindaba ezikhuthazayo. Womeleza iqela lakhe lobunkokeli ngeBhodi yabaLawuli esandula ukusekwa, wongeza uBhupinder Singh, owayesakuba ngumlawuli weemveliso zeBentley Systems, kwibhodi yabalawuli.
Ngaphezulu kweminyaka engama-34 yomsebenzi kwikhompyutha kwimveliso yesoftware, uBhupinder Singh akadingi kwaziswa. Iminyaka yakhe engama-26 yamava kwi-Bentley Systems incede inkampani ukuba izenzele njengomboneleli ophambili wezisombululo zobunjineli kwiziseko zehlabathi. Iinkqubo zeBentley zine-IPO ephumeleleyo ngoSeptemba 2020.
Phaneesh Murthy, USihlalo kunye noMlawuli ongekho kwiSigqeba soLawulo IMagnasoft kwabelwana ngalo msitho:Ndiyamazi uBhupinder ixesha elide kwaye bekumnandi ukudibana naye. Ngumhlobo olungileyo! Ukujoyina ibhodi yeMagnasoft linyathelo elincamisayo eliya kuhambo lokukhula esicinga ngalo. Ndiqinisekile ukuba amava akho aya kusivumela ukuba silinganise iindawo eziphakamileyo kwaye siphumelele kwimizekelo emihle. ".
Ukomeleza iingcinga zakho, Bobbie Kalra, uMseki kunye ne-CEO yeMagnasoft, Uthe:
“Siyavuya kakhulu ukuba noBhupinder kwibhodi yethu yabalawuli. Ngelingekho elinye ixesha elingcono lokuba uBhupinder azibandakanye nathi kunye nezinye iinkokeli zeshishini ezinje ngoPhaneesh, uRajiv noAbraham.
Umzi mveliso ujongene nokuphazamiseka kwezobuchwephesha ngoku. Kuninzi okuqhubekayo malunga neeseti zedatha ezisetyenziselwa iinkqubo zoqeqesho, ukuqinisekiswa kwedatha, ukuphuculwa kwesisombululo, kwaye iMagnasoft ikulungele ukufaka inguqulelo yayo engu-3.0 ukuze idlale indima ebalulekileyo kule meko yenguqu yedijithali. Isikhokelo sikaBhupinder ngeli xesha siya kubaluleka. Amava akhe abanzi kulawulo lweemveliso kunye neenkonzo ziya kuba lukhuthazo olukhulu kuhlumo lwethu. IMagnasoft ilungiselelwe kakuhle ukuthatha imiceli mngeni emitsha kwaye indibaniselwano yayo isinike amandla amatsha ukuzisa izisombululo zedatha entsha kwiimarike ezinokusombulula iingxaki zehlabathi lokwenyani. "
UBhupinder Singh unochulumanco ukuqalisa lo mbutho mtsha njengoko amazwi akhe esithi: “Ndichulumancile kukufunda malunga nesakhono senkampani, umgangatho weenkonzo, izisombululo ezintsha, amava ayo amakhulu, ukuzinikela kwayo ekwenzeni umahluko. Inguqu yedijithali iyakhawuleza kwaye inefuthe kwihlabathi ngendlela engazange ibonwe ngaphambili. Njengoko umhlaba ubuyela kubhubhane, isantya sotshintsho siya kunyuka, kwaye iMagnasoft ikulungele ukuququzelela olo tshintsho. ”
Ngeminyaka yam engama-34 yamava okuqhuba izisombululo zedijithali kwiziseko ezibanzi, ndijonge phambili ekuncedeni IMagnasoft ukuseka ubudlelwane obusekwe kwixabiso kunye nabathengi. Ndiyathemba ukukunceda uqonde ukuba itekhnoloji iya phi kwaye ikukhokele ekuphuhliseni isoftware kunye nezisombululo ezinokuphucula i-automation kunye nokuphucula umgangatho weemveliso zokuphela.
Ngokuqinisekileyo iya kuba luhambo olonwabisayo ngaphambili!